Muhiimadda Daryeelka Wanaagsan ee Hab-nololeedka Caafimaadka leh
A imtixaan dumar fiican waa imtixaan daryeel caafimaad oo dhameystiran oo haweenka lagu qiimeeyo caafimaadka guud. Tani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah daryeelka kahortaga haweenka maadaama ay iska baareyso cudurada ku dhaca haweenka iyo kansarka inta lagu jiro baaritaanka miskaha, baaritaanka naasaha, iyo baaritaanka mammogram. Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, waxaan kugula talineynaa in gabdhaha da'da yar ee da 'yarta ah ay bilaabaan qaadashada imtixaanka dumarka, dumarka oo dhan oo 21 jir ka weynna hal ayey sanad walba qaadaan. Baadhitaanka haweeneydu waa muhiim maadaama uu ku siinayo waqti aad kagala hadasho baaritaanka cudurada kahortaga iyo galmada lagu kala qaado xafiisyadeena Columbus, Dublin, ama Westerville, OH. Waxaan sidoo kale u soo jeedin karnaa talo soo jeedinno hab-nololeed caafimaad leh bukaannadeena si looga caawiyo inay ku noolaadaan nolosha ugu caafimaadka badan ee suurtogalka ah.
Maxaa lagu soo daray imtixaanka sanadlaha ee dumarka wanaagsan?
Intii lagu gudajiray baaritaanka dumarka ee Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, xirfadlayaashayada caafimaad ayaa sameeya baaritaanadan inta lagu guda jiro booqashadaada daryeelka dumarka wanaagsan:
Baaritaanka naasaha: Imtixaankani wuxuu raadinayaa unugyo aan caadi ahayn, dheecaan, ama buruqyo.
Imtixaanka miskaha: Tani waxay raadineysaa wax aan caadi aheyn oo ku dhaca makaanka afkiisa, faruuryaha xubinta taranka, ugxan sidayaasha, miskaha, ilmagaleenka, xubinta taranka haweenka, ama cambarka.
Baaritaanka Pap smear: Baaritaanka kansarka xubinta taranka dumarka had iyo jeer laguma sameeyo baaritaan kasta laakiin waa aalad ka hortag oo muhiim ah oo la sameeyo seddexdii sanoba mar.
Xakamaynta dhalmada: Bukaannada xiiseynaya ka hortagga uurka, waxaan kala hadli karnaa xulashooyinka sida ugu wanaagsan uga hortaga uurka.
Raajada Mammogram: Bukaankeena oo dhami uma baahna hal, laakiin xafiiskayaga Columbus, OH wuxuu siiyaa jeegag mammogram ah kuwa aan kugula talineyno baaritaanka.
Imtixaanka STD: Tani waxay naga caawineysaa inaan ka baareyno soo-gaadhista STD-ga waana qayb ikhtiyaar u ah baaritaankaaga.
Waxaan dooneynaa in bukaankeena oo dhami ay dareemaan raaxo leh inay ka wada hadlaan wixii walaac ah ee ay qabaan ama astaamo kasta oo ay dareemayaan oo ay ka walaacsan yihiin. Calaamadahaas waxaa ka mid ah dhibco kala sooca muddooyinka caadada, galmada xanuunka, dheecaanka, ama kuus kuus ah naaska.
Ka-hortagga ka-hortagga haweenka
Marka laga hadlayo daryeelka caafimaadka haweenka, kooxdayadu waxay si adag u shaqeeyaan si ay uga caawiyaan bukaankeenna inay ka fogaadaan inuu ku dhaco kansarka ama cudurada haweenka ku dhaca. Tani waxay ku bilaabmaysaa qaab nololeed caafimaad qaba oo kaa dhigaya inaad dareento caafimaad markaad da 'noqoto. Qaar ka mid ah talooyinka qaab-nololeedka ee aan u soo jeedinno bukaannadeenna Ohio oo dhan waxaa ka mid ah:
Ka fogow sigaar cabidda, cabidda aalkolada, ama maandooriyaha sharci darrada ah.
Joogto miisaan caafimaad leh oo leh cunto caafimaad leh iyo jimicsi joogto ah.
Raadso caawimaad haddii aad dareento murugo ama aad la kulanto isbeddello isdaba joog ah.
Isticmaal ka hortagga uurka markii aad galmo sameyneyso.
Ka ilaali naftaada STIs adoo isticmaalaya cinjirka galmada.
Jadwal u samee imtixaannada caadiga ah, tijaabooyinka, iyo tallaalada dhammaan dhakhaatiirtaada, oo keliya kuweenna ma aha.
Maxay muhiim u yihiin imtixaannada caafimaadka ee haweenka?
Tijaabooyinka baaritaanka caafimaadka ayaa muhiim u ah qof walba maadaama ay gacan ka geystaan ​​ogaanshaha dhibaatooyinka goor hore goorta sida ugu habboon wax looga qaban karo. Baadhitaanka caafimaadka dumarka si fiican ayaa looga caawiyaa in lagu ogaado cilladaha aan caadiga ahayn xitaa marka astaamuhu aanu si cad u caddayn. Tan waxaa la cadeeyay inay badbaadiso nolosha.
Baro sida qaab nololeed caafimaad leh u horumarin karto caafimaadkaaga guud
Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, waxaan ka caawinaa bukaankeena bukaanka ah inay ilaashadaan caafimaadkooda guud sida ugu fiican. Waxaan fahansanahay inay dhib noqon karto in qaar kamid ah baaritaanadan ama baaritaanadaan la sameeyo, laakiin waxay muhiim u yihiin daryeelkaaga kahortaga ah. Waxaan si adag u shaqeyneynaa si aan u hubino inaad sida ugu macquulsan u raaxeyso. Si aad u ballansatid imtixaan haween ah si aad ugala hadasho talooyinka qaab nololeedka caafimaadka qaba, call xafiiskayaga Columbus, Dublin, ama Westerville, OH maanta.
Goobta Dublin Goobta Columbus Goobta Westerville Daryeelka Dumarka Fiican